Monday August 28, 2017 - 08:48:35 in Wararka by Super Admin
Waxaa la isku raacay in maraykanka iyo kaaliyaashiisuba cadaw ku yihiin dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah loona baahanyahay in hurdada laga kaco.
Barnaamijyo uu qabtay Radio Alfurqaan ayaa lagu falanqeeyay dhacdada foosha xun ee maraykanka iyo kuwa u adeegaya ku kaceen taas oo banaanka soo dhigtay naceybka gaamuray ee shisheeyaha iyo inta u daacadda ahu u qabaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah.
Maraykanka ayaa doonaya in uu gurto khayraadka ka buuxa soomaaliya dhanka kalana waxa uu damacsan yahay in dalka iyo dad loo qaybiyo dowladaha uu naas nuujiyo ee kenya iyo itoobiya kuwaasoo ingiriisku horay ugu daray dhul iyo dad soomaaliyeed.
Geesta kale maraykanku waxa uu xasuusan yahay dhiabatadii 1993-kii lagu gaarsiiyay soomaaliya xilligaas oo meydadka askartiisa muqdisho ay ku jiid jiideeyn haweenka iyo carruurta inkastoo sanadahaas asiguna uu dad badan xasuuqay.
sidaa aawgeed indheer garaadka iyo aqoon yahanada somaaliyeed waxay tilmaamayaan in tilaabooyinka uu qaadayo aarsi ku jiro.
Halkan ka dhageyso Warbixin 1-aad oo ku saabsan Xasuuqii Bariire
Halkan ka degso Warbixi 2-aad oo ku saabsan Xasuuqii Bariire MP3
Isha Codadka: Idaacadda Alfurqaan
Weerar Madaafiic Ah Oo Lagu Qaaday Saldhigga Ciidanka Keny Ee Deegaanka Buusaar.